I-XXXII Ijenali Yemiklomelo Yezaziso | Izincwadi Zamanje
I-XXXII Ijenali Yemiklomelo Yezaziso
Kusuka Amahlaya Blog Ngithola ukuthi Imiklomelo de Idayari Yezaziso:
UFelipe Hernandez Cava (IMadrid, 1953) ungomunye wababhali besikrini abathela izithelo kakhulu kumahlaya ethu. Ngo-1972, nabadwebi bamakhathuni uPedro Arjona noSaturio Alonso, wasungula iqembu elihlanganisiwe i-El Cubri, elalizogqugquzela isitayela sokuvuselela emkhakheni wamahlaya aseSpain. Umqondisi womagazini abasaqala phansi abanjengo "Madriz" kanye "neMedios Revinados", umbonisi wesikhungo, kanye nethiyori eyaziwayo, uHernández Cava uzuze umklomelo "wesikripthi samahlaya esihamba phambili" ngomsebenzi wakhe omuhle ku "Izinyoka Eziyizimpumputhe" , i-albhamu edwetshwe nguBartolomé Seguí futhi yahlelwa nguBD Banda.
UJosé María Martín Saurí (Barcelona, ​​1949) waqala umsebenzi wakhe wobuciko esebenzela iBruguera kanye nezinhlangano zeCreaciones Editorial and Selecciones Ilustradas. Ngo-1982, ngemibhalo kaPérez Navarro, wethula i- “Odysseus” kumagazini kaToutain i- “Illustration + Comix Internacional”. Kungaba ukuzinikezela kwakhe okucacile. Kude nezwe lamahlaya, uMartín Saurí ubuye ngokunqoba ne "La conjetura de Poincaré", umsebenzi obhalwe nguRaule futhi wahlelwa nguDiábolo. Ngenxa yokubona kwakhe okukhazimulayo kule albhamu, lo mculi waseCatalan ube ngumuntu obhekele kahle ukuthola umklomelo “womdwebo opopayi ophuma phambili”.
I-Melchor Adolfo Prats González "Mel" (UCádiz, 1974) waqala umsebenzi wakhe wokushicilela amahlaya emifanekiso ku- "Diario de Cádiz". Ngo-2004, ngo “Míster K” ka-Ediciones El Jueves, wakhulelwa u- “¡Tu Padre!”, Uchungechunge olwamukelwa kahle. Eminyakeni emibili kamuva, uMel ujoyina abasebenzi be "El Jueves", okwenzela isonto lakhe eliyinhloko isaga lakhe, "uGenaro, la brasa en casa", umsebenzi abonisa kuwo umusa omuhle kakhulu futhi awuthole ngokufanele umklomelo "weskripthi sekhathuni esihamba phambili".
U-Elena María Soria Miranda "Mariel" (San Salvador de Jujuy, Argentina, 1946) wathuthela ezweni lethu ngo-1975, esebenzisana nezincwadi ezahlukahlukene zaseSpain. Maphakathi namashumi ayisishiyagalombili, waphinde wathola isimilo sakhe esidala, uMamen owayenolaka, futhi, ngemibhalo kaManel Barceló, wakhombisa uchungechunge olusha kumagazini i- “El Jueves”, olwanqoba masinyane. Okwesibili emlandweni wale Miklomelo, ikhanda elibomvu elinezinqa elilingisa esigabeni sika “Mamen”, lidonsela ukunakekela kweJury, liphinde lenza uMariel waba ngumnqobi ocacile womklomelo “womdwebo opopayi ohlekisayo”.
"Kufushane kabili" ungumagazini okhishwe eCórdoba ngu-Ariadna futhi uqondiswe nguJosé Vicente Galadí oshisekayo, ophinde aqondise ilebula lokushicilela. Le ncwadi ehlukile, neminyaka eyisithupha yokuphila, esivele ifinyelele ezindabeni eziyishumi nesishiyagalolunye esikhathini sayo sesibili, iyabazisa abasebenzi abasebenza ngokubambisana, ababumbene kuyo ngenxa yesithunzi nobuntu bomqondisi wayo. Kulesi senzakalo, ijaji alikaze libe nokuncane ukungabaza ekunikezeni i- "Twice Brief", ngobulungiswa obukhulu, umklomelo "kamagazini omuhle wonyaka".
Ama-Diabolo Editions Yiprojekthi ethembayo, eyalelwe nguLorenzo Pascual noPilar Lumbreras, owabona ukukhanya ngo-2006 ukuze abuyise ngokufanele umsebenzi wabalobi abasebasha, abezwe nabangaphandle, ngaphezu kokukhuthaza amahlaya ahlola imikhakha emisha emkhakheni we-Sequential Art. Ukuqhubeka kukaDiabolo ngalesi sikhathi bekumangalisa. Ukubheja kwakhe ngesibindi nangesibindi kuholele iJury ukuthi imnikeze umklomelo wokuba "ngumhleli wonyaka".
"Ama-Vignette avela e-Atlantic" Kungumkhosi wamahlaya obubanjelwe eLa Coruña iminyaka eyishumi nambili. Lo mbukiso, owenziwe, wakhuthazwa futhi waqondiswa nguMiguelanxo Prado, njengamanje ungomunye ohlonishwa kakhulu eSpain. Ngalo msebenzi obalulekile wokusabalalisa indawo yonke yamahlaya, "ama-Vignettes ase-Atlantic" athole umklomelo "ngomsebenzi omuhle kakhulu osekela ikhomikhi."
UJesús García Sierra "Yexus" (USantander, 1962), ngaphezu kokuba ngumdwebi wamakhathuni, ube ngumdwebi wamasiko, umlondolozi wombukiso, umqondisi kamagazini, umbhali wephephabhuku nomhleli wezincwadi ezikhangayo njenge: "Conan", "Berni Wrightson", "Max" no "Sergio UToppi, umbonisi phakathi kwemihlaba emibili ”. Kusukela ngo-1991, umbhali wenze isigaba samasonto onke esinikezelwe amahlaya ku- “El Diario Montañés” kaSantander. Ngalo msebenzi wokugcina, u-Yexus ube kulo nyaka engumnqobi ofanele womklomelo we-Diario de Avisos "womhlaziyi ohamba phambili".
Enric nguManuel González "Enrich" (Venissieux, France, 1930) ushicilela izingcezu zakhe zokuqala zamahlaya komagazini i- "Trampolín" ne "Alex", okuba yingxenye ngemuva kwesigaba sokuqala se- "Uncle Live". Umsebenzi wakhe wobungcweti omude uphawulwe ngochungechunge lwabalingiswa abadumile abanjengo: "Ciriaco Majareto", "El Caco Bonifacio", "Tontáinez", "Don Inocencio", "El marriage Pirúlez", "Crispin" no "1 × 2 uMhlaseli ”, phakathi kwabanye abaningi. Ngenxa yomsebenzi wakhe oyingqayizivele wobuciko, lo mdwebi ongumakadebona ube ngumamukeli ofanele womklomelo "ngawo wonke umsebenzi wakhe wokuhlekisa."
ULeopoldo Ortiz Moya (ICartagena, Murcia, 1930) ingenye yezimpawu eziyiqiniso zeSikole SaseValencian, esithuthukisa cishe wonke umsebenzi wakhe wamahlaya eMaga. Kulesi sihleli wayezodweba imidlalo ewuchungechunge efana ne: "El Príncipe Pablo", "Velvet Negro", "Carlos de Alcántara" ne- "Bengala", phakathi kwabanye. Umklomelo "wawo wonke umsebenzi wakhe ongokoqobo" wukuhlonishwa kwale Jury kumuntu ongangabazeki futhi ongenakuphikiswa kaLeopoldo Ortiz.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Imincintiswano Nemiklomelo » I-XXXII Ijenali Yemiklomelo Yezaziso
Izikhangiso ezihamba phambili zahlanganiswa zaba incwadi
Imiklomelo yeHarvey 2009